Amafasitela aseplastiki yanamuhla ahle futhi ahlelekile. Ngokuqinisekile bayakuvikela igumbi kusuka emabhulofini, ugcine ukushisa ngaphakathi kwendlu. Lokhu ikakhulukazi ngenxa ye-raber yokufaka uphawu kumafasitela epulasitiki.
Vula iwindi ngokukhululekile;
Vikela izingxenye zokuxhumana kusuka kumonakalo;
Lungisa ukucindezela komshini;
Qinisekisa ukuphepha kwamawindi.
Izinhlobo eziyinhloko zemigodi yerabha
I-rubber yomsindo (EPDM).
I-elastomer e-thermoplastic (TPE).
I-EPDM ye-Rubber ye-Rubber inomsebenzi wesikhathi eside (iminyaka engu-10 ngokumelene no-4-5 wepulasitiki), kodwa kubiza kakhulu kune-TPE futhi inemibala emibili nje kuphela : i-grey no-black. Ngenkathi ipulasitiki ingafakwa ngombala kunoma imuphi umbala oyifunayo. Amandla ekhanda we-rabri yokwenziwa ingaphezu kwesigamu esisodwa nesigamu, ukuphumula - kuze kube izikhathi ezine.
Lapho ukufaka i-raber yokufaka uphawu lokufaka amafasitela epulasitiki
Ezingxenyeni zangaphakathi nezangaphandle zeqabunga eduze nomjikelezo walo.
Ezingxenyeni zombili zamawindi ama-double-glazed.
I-grooves for the seal yisephrofayela yefreyimu namaqabunga. Imfucumfucu kufanele ihambisane ngokuqinile emgodini wephrofayela. I-sealant ine-protrusion yama-mushroom. Uhlala emgodini ngokuqinile ukuthi ukudonsa ngesandla kunzima kakhulu.
Ukufaka uphawu lwe-raber i-thickness kanye nesigaba esiphambene. Ngakho, i-rabber yenkampani yaseTurkey "iShilhil Kauchuk" inezinhlobo ezingu-16 ezahlukeneyo.
Ukugqoka i-raber ngamaprosesa epulasitiki okwenziwa nge-rabri yokufakelwa inezindawo ezilandelayo:
Igcina izimfanelo zayo ebangeni lokushisa kusuka -50 kuya ku-80 degrees Celsius;
Ungesabi ukuchayeka emanzini, umswakama, amakhemikhali, i-ultraviolet, i-solvents, i-alkalis;
Ukugcina amandla okuqina (ngokushesha abuyele esimweni sawo sokuqala) kanye noguquko;
Ivikela emlonyeni nasothuli;
Kufanelekile izinhlelo eziningi zamafasitela epulasitiki.
Kungakhathaliseki ukuthi iwindi elungile kangakanani, lidinga ukwenza imisebenzi yokulondoloza. Ukunakekelwa okukhethekile kudinga ibhande le-rubber kumafasitela epulasitiki (isithombe). Kuyadingeka:
Hlanza othulini ngaphandle nangaphakathi kwezinto eziwela ngaphansi kwenjoloba.
Lubricate nge-silicone ekhethekile.
Uma amafutha namafutha kunoma imuphi umsuka angena ebhodini le-rubber emafenjini epulasitiki avulekayo. Ukuvimbela le nkinga, abakhiqizi bayigcoba ngezindlela ezine-glycerin. Ungaphatha uphawu lwe-sealant kanye ngonyaka ukuze uvikeleke.
Injoloba yenjoloba yombala omnyama ishiya amathrekhi epulasitiki emhlophe ngenxa yokutholakala kwe-soot kuzo (itha amandla amandla e-sealant). Basuswa nge-detergent.
Ukufaka esikhundleni se-sealant engasebenzi
Uma i-sealant esezingeni eliphansi efakwe ekukhiqizeni iwindi lepulasitiki, ekugcineni liqala ukudiliza: lidiliza, lihlukanise futhi liqhekeke zibe yizicucu kanye nocansi. Lokhu kuholela ekucindezelekeni kwewindi. Ngenxa yalokho, umsindo, umswakama, umoya obandayo ungena ekamelweni. Iwindwangu ephindwe kabili ingawela ngaphandle kwefasitela, ilimaze abakwa-Hosts noma abadlulayo abahleliwe.
Shintsha i-rubber uma:
Ebusika izingxenyana zegumbi lezingilazi ziyashisa;
Ama-Windows athwala ngapha komkhawulo weqabunga;
I-shutter kunzima ukuvala;
Imfucumfucu ivuvuka phezulu, izinti, imifantu, iwa ngemuva kweyunithi yeglasi noma iphunga elimnandi.
Ukufaka uphawu lwe-raber ngefasitela lepulasitiki kuhlukahluka ngokuvumelana nalesi sibonelo:
Ukuthatha i-raber ye-section edingekayo kanye nobukhulu.
Susa i-rubber endala, uhlanza izimpande zothuli futhi ugeze nge-detergent, sula usomile.
Susa ubuhlalu be-glazing ngefosholo ekhulayo, phuma amawindi ama-double-glazed, ususe izinsalela ze-rubber.
Shintsha ngokucophelela uphawu phakathi kwemifula yephrofayli eduze nomkhawulo weqabunga, ngaphandle kokudonsa noma ukwenza ama-hummocks.
Qedela imikhawulo, kuqala ushiye isitoreji sibe ngu-1 cm, bese ubanciphisa, unqume ngokweqile.
Faka i-sealant eseduze nomkhawulo weqabunga, phezulu phezulu nangaphansi. I-Rubber emaceleni ukuze ulungise ne-glue.
Ukuze uthole i-rubber emifula ngaphansi kwamawindi ama-double-glazed. Sika zonke izingxenye ngekhasi lokuma. I-Lateral faka emva kokuphezulu nokuphansi.
Faka amawindi ama-double-glazed ukuze uphawu lungabincibilika ngaphakathi.
Lungisa ubuhlalu be-glazing usebenzisa isando se-PVC.
Lungisa ukuvulwa kwamapheshana, ukubopha kwabo, ukuqina emva kokukhanda.
Ukusetshenziswa okuhambisanayo kwazo zonke izigaba kuzovumela ifasitela ukuthi liphinde libe yisivikelo esithembekile sefulethini lakho.
Traffic ezimali izinhlangano
Shasta, Intaba e-California: izici nezithombe